မငျးသားကွီးဦးကြျောသူရေးသားလာတဲ့ သုဘရာဇာရဲ့အဖွဈအပကျြ – Cele Lover
တဈခတျေတဈခါကမွနျမာပွညျရဲ့ရုပျရှငျလောကနရောတဈခုမှာ ထိပျတနျးကနအေောငျမွငျမှုနရောကိုရယူနိုငျခဲ့အထဲမှာမငျးသားကွီးဦးကြျောသူတဈယောကျလညျးအပါအဝငျဖွဈပါတယျနျော. မငျးသားကွီးဦးကြျောသူကတော့ အကယျဒမီဆုတှကေိုလညျး ရယူနိုငျခဲ့သလို ပရိသတျတှရေဲ့ခဈြခွငျးတှကေိုပါ ထာဝရသိမျးပိုကျထားနိုငျသူပဲဖွဈပါတယျ..
မငျးသားကွီးဦးကြျောသူကတော့ အောငျမွငျနရေငျးမှာဘဲ အနုပညာအလုပျကနရေပျနားပွီးနောကျ ပရိဟိတအလုပျတှကေိုပဲ ဆကျလကျလုပျကိုငျနခေဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
အနုပညာအလုပျတှကေိုဆကျလကျလုပျကိုငျခွငျးမရှိတော့ပမေဲ့ ပရိသတျတှရေဲ့ရငျတှထေဲတော့ အမွဲရှိနတောဖွဈပါတယျနျော. ခုခြိနျမှာ‌တော့ မွနျမာနိုငျငံမှာဖွဈနတေဲ့အာဏာသိမျးမှုကွောငျ့ မတရားမှုကိုတှနျးလှနျခဲ့တဲ့ ပွညျသူခဈြအနုပညာရှငျတျောတျောမြားမြားလညျး အငျးစိနျထောငျထဲမှာ ဖမျးဆီးခံထားရပွီး တဈခြို့ကတော့ ဝရမျးပွေးဘဝကို ရောကျရှိနရေပွီဖွဈပါတယျ။
” ကိုရီးယားမှာပေါ့ဗြာ။ ။အကယျဒမီရုပျရှငျသရုပျဆောငျဖွဈတယျလို့ ကိုရီးယားလို မိတျဆကျပေးတော့ ပွုံးပွလရေဲ့။ ရုပျရှငျလညျးရိုကျတယျ။ အသုဘလညျးခတြဲ့ ကုသိုလျဖွဈသုဘရာဇာလို့လညျး မိတျဆကျပေးရော ပွုံးပွယုံတငျမကတော့ဘူး အတငျးလကျကိုဆှဲကိုငျဖကျပွီး ဓါတျပုံရိုကျခိုငျးတော့တာဘဲဗြာ။
တဈခြို့ဆိုရငျထမငျးစားပှဲမှာ တကယျ့အဓိကဧညျ့သညျတျောတှေ ထိုငျတဲ့ ထိပျဆုံးထိုငျခုံမှာနရောခပြေး၊ အရေးကွီးတဲ့နိုငျငံတျောအခနျးအနားဖှငျ့ပှဲမှာ ဖဲကွိုးဖွတျပေးခိုငျးလိုခိုငျး နရောပေးလိုကျကွတာလေ။ ဒါကလူကွီးကော လူငယျကော မိနျးမကွီးကော မိနျးမငယျလေးတှကေောဗြ။
သူဌေးကော ကမ်ဘာကြျောမငျးသားကော ပွညျသူအရပျသားကောဗြ။ အားလုံးကတဈပုံစံထဲ ဆကျဆံမှုတုနျ့ပွနျမှုတှတေဈထပျထဲဗြာ။ မွနျမာပွညျဆိုရငျတော့ အရငျကပေါ့ဗြာ။မငျးသားပါဆိုတော့ပွုံးပွီးဓါတျပုံရိုကျရငျရိုကျ အျောတိုထိုးခိုငျးရငျခိုငျးပေါ့။
သုဘရာဇာဆိုတာနဲ့မကျြနှာပကျြပွီး နူတျခမျးမဲ့ရှဲ့ပွီးဝေးဝေးကိုရှောငျထှကျသှားလရေဲ့။ဒါဟာ ပွညျပနိုငျငံနဲ့မွနျမာနိုငျငံရဲ့မတူညီတဲ့ဆကျဆံရေးပေါ့ဗြာ။ဪ…… ထရေဝါဒဗုဒ်ဓဘာသာတှရေဲ့နိုငျငံမှာဘာဖွဈလို့မြားဒီလောကျအယူသညျးကွပါလိမျ့လို့…ဒှိဟဖွဈမိပါရဲ့ဗြာ။ ❤ ကြျောသူ ❤ ” ဆိုပွီး ရေးသားလာခဲ့ပါတယျ. ။
တစ်ခေတ်တစ်ခါကမြန်မာပြည်ရဲ့ရုပ်ရှင်လောကနေရာတစ်ခုမှာ ထိပ်တန်းကနေအောင်မြင်မှုနေရာကိုရယူနိုင်ခဲ့အထဲမှာမင်းသားကြီးဦးကျော်သူတစ်ယောက်လည်းအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်နော်. မင်းသားကြီးဦးကျော်သူကတော့ အကယ်ဒမီဆုတွေကိုလည်း ရယူနိုင်ခဲ့သလို ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခြင်းတွေကိုပါ ထာဝရသိမ်းပိုက်ထားနိုင်သူပဲဖြစ်ပါတယ်..
မင်းသားကြီးဦးကျော်သူကတော့ အောင်မြင်နေရင်းမှာဘဲ အနုပညာအလုပ်ကနေရပ်နားပြီးနောက် ပရိဟိတအလုပ်တွေကိုပဲ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အနုပညာအလုပ်တွေကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခြင်းမရှိတော့ပေမဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ရင်တွေထဲတော့ အမြဲရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်. ခုချိန်မှာ‌တော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့အာဏာသိမ်းမှုကြောင့် မတရားမှုကိုတွန်းလှန်ခဲ့တဲ့ ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်တော်တော်များများလည်း အင်းစိန်ထောင်ထဲမှာ ဖမ်းဆီးခံထားရပြီး တစ်ချို့ကတော့ ဝရမ်းပြေးဘဝကို ရောက်ရှိနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။
” ကိုရီးယားမှာပေါ့ဗျာ။ ။အကယ်ဒမီရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ဖြစ်တယ်လို့ ကိုရီးယားလို မိတ်ဆက်ပေးတော့ ပြုံးပြလေရဲ့။ ရုပ်ရှင်လည်းရိုက်တယ်။ အသုဘလည်းချတဲ့ ကုသိုလ်ဖြစ်သုဘရာဇာလို့လည်း မိတ်ဆက်ပေးရော ပြုံးပြယုံတင်မကတော့ဘူး အတင်းလက်ကိုဆွဲကိုင်ဖက်ပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်ခိုင်းတော့တာဘဲဗျာ။
တစ်ချို့ဆိုရင်ထမင်းစားပွဲမှာ တကယ့်အဓိကဧည့်သည်တော်တွေ ထိုင်တဲ့ ထိပ်ဆုံးထိုင်ခုံမှာနေရာချပေး၊ အရေးကြီးတဲ့နိုင်ငံတော်အခန်းအနားဖွင့်ပွဲမှာ ဖဲကြိုးဖြတ်ပေးခိုင်းလိုခိုင်း နေရာပေးလိုက်ကြတာလေ။ ဒါကလူကြီးကော လူငယ်ကော မိန်းမကြီးကော မိန်းမငယ်လေးတွေကောဗျ။
သူဌေးကော ကမ္ဘာကျော်မင်းသားကော ပြည်သူအရပ်သားကောဗျ။ အားလုံးကတစ်ပုံစံထဲ ဆက်ဆံမှုတုန့်ပြန်မှုတွေတစ်ထပ်ထဲဗျာ။ မြန်မာပြည်ဆိုရင်တော့ အရင်ကပေါ့ဗျာ။မင်းသားပါဆိုတော့ပြုံးပြီးဓါတ်ပုံရိုက်ရင်ရိုက် အော်တိုထိုးခိုင်းရင်ခိုင်းပေါ့။
သုဘရာဇာဆိုတာနဲ့မျက်နှာပျက်ပြီး နူတ်ခမ်းမဲ့ရွဲ့ပြီးဝေးဝေးကိုရှောင်ထွက်သွားလေရဲ့။ဒါဟာ ပြည်ပနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မတူညီတဲ့ဆက်ဆံရေးပေါ့ဗျာ။ဪ…… ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာတွေရဲ့နိုင်ငံမှာဘာဖြစ်လို့များဒီလောက်အယူသည်းကြပါလိမ့်လို့…ဒွိဟဖြစ်မိပါရဲ့ဗျာ။ ❤ ကျော်သူ ❤ ” ဆိုပြီး ရေးသားလာခဲ့ပါတယ်. ။
Previous Article သဆေုံးသှားတဲ့ မာယာလေးအတှကျ လကျစားခပြွေမယျဆိုပွီး ဒေါသအိုးပေါကျကှဲလာခဲ့တဲ့ မငျးမျောကှနျး…
Next Article ကားလေးကိုရောငျးခကြာပွညျသူမြားအတှကျ အကုနျလှူဒါနျးမယျလို့ပွောလာတဲ့ စူးရှထကျ